Muxuu ku saleysan yahay khilaafka Trump kala dhaxeeya waddamada kale ee NATO? - BBC News Somali
Trump ayaa waddamada kale ee gaashaanbuurta Nato ku eedeeyay in ay Mareykanka ka faa'iideysanayaan.
In kastoo taasi ay jirto, haddana, saraakiil Mareykan ah ayaa wakaaladda wararka ee reer Yurub u sheegay in la filayo in madaxweyne Trump uu waddamada kale ee Nato u xaqiijiyo sida ay uga go'antahay ilaalinta qodobka shanaad ee axdiga Nato, kaa oo dhigaya weerar kastaa oo ka dhan ah waddan xubin ka ah Nato in uu ka dhigan yahay weerar lagu qaaday waddamada Nato dhammaantood.
Taageerayaasha madaxweyne Trump ee gudaha Mareykanka gaar ahaanna kuw aay ku weyn tahay waddaniyadda ayaa qaba ra'yi ah in Mareykanka uu yareeyo kharashka uu ku bixiyo Nato.
Maxaa iska galay arrinta Nato iyo muranka ganacsi ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Yurub?
Bishii la soo dhaafay ayaa Mareykanku waxa uu dunida ka abuuray cabsi dagaal dhanka ganacsiga ah kaddib amrkii uu canshuuro dheeraad ah ku soo rogay waxyaabaha Mareykanka looga soo dhoofiyo waddamada reer Yurub, Canada, Mexico iyo waddamo kale oo ay Mareykanka xulufo yihiin. Reer Yurub ayaa dhankooda canshuur aargoosi ah ku soo rogay baayaacmushtariga Mareykanka looga soo dhoofiyo.
TOOS Madaxweyne sheegay in dadka laga talaalay Covid-19 ay halis ugu jiraan inay qaadan HIV/AIDS
Kalkaaliye kufsaday haweeneey koomo ku jirtay oo xabsi lagu xukumay